Falimaha Rasuullada 1,9 waxaa naloo sheegay: "Oo markuu yidhi, Isagu aad buu kor u qaaday oo daruur baa indhaha ka qaadday hortooda." Tani waxay su'aal fudud ii tahay: Sabab?
Muxuu Ciise ugu kacay jannada sidan?
Bevor wir aber auf diese Frage zurückkommen, wollen wir uns den folgenden drei Versen zuwenden: Und während sie dem entschwindenden Heiland noch nachschauten, tauchten neben ihnen zwei weiss gekleidete Männer auf: „Ihr Männer von Galiläa“, sagten sie, „was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der heisst Ölberg und liegt nahe bei Jerusalem, einen Sabbatweg entfernt“ (Aayadaha 10aad).
Waxaa jira laba qodob oo aasaasi ah oo ku xusan aayaddan - Ciise wuu u baxsaday xagga jannada wuuna soo noqon doonaa. Labada qodobba waxay muhiimad weyn u leeyihiin caqiiddada Masiixiyiinta, labaduba waxay sidoo kale qayb ka yihiin Caqiidooyinka Rasuulladu. Marka hore, Ciise wuxuu u kacay jannada. Macnaha guud, guud ahaan waxaan ka hadlaynaa jannada Masiixa, oo ah maalin ciida loo xuso maalin kasta oo Khamiista ah 40 maalmood kadib Istaaga.
Qoraalkani wuxuu sidoo kale tilmaamayaa inuu Ciise soo laaban doono - wuxuu kusoo laaban doonaa si la mid ah oo uu jannada kor ugu aaday. Fikradayda, qodobkaan ugu dambeeya wuxuu tilmaamayaa sababta Ciise u aaday jannada si muuqata oo qof walba loo arkayay - habkan ayaa lagu adkeeyay inuu sidoo kale dib ugu soo laaban doono dadka oo dhan.
Way ku fududaan lahayd inuu kaliya xertiisa ogeysiiyo inuu ku noqon doono aabihiis oo uu maalin uun dhulka ugu soo noqon doono - markaas ka dib wuu fududaan lahaa, sida waqtiyada kale, laakiin markan iyada oo aan mar dambe la arkin , Ma aqaano sabab kale oo xagga fiqi ahaaneed oo loogu talagalay in lagu arko sabaynteedu cirka u jeeddo. Wuxuu rabay inuu farriin u diro xertiisii ​​oo ayaynu iyaga usameynay, wuxuu doonayey inuu farriin gaar ah diro.
Isaga oo u wada fiirsada dadka oo dhan, Ciise wuxuu cadeeyay inuusan isagu dhulka ka tegin oo keliya, laakiin uu ku fadhiisan doono gacanta midig ee Aabbihiisa jannada ku jira oo na istaagi doona inuu ahaado wadaadka sare weligiis ah. Sida uu qorey mid ka mid ah qoraaga, Ciise waa "ninkeena jannada ku jira". Waxaan ku leenahay qof ku sugan boqortooyada jannada oo fahmaya cidda aan nahay, yaa garanaya daciifnimadeena iyo baahiyadeena, maxaa yeelay isaga qudhiisa waa bini aadam. Xataa jannada weli waa aadanaha iyo Ilaah, sida ay ahaayeen.
Xitaa ka dib markii uu kor u kacay, Qorniinku wuxuu ugu yeeraa qof. Markuu Bawlos u wacdiyey Aasiyaanka magaalada Areopagus, wuxuu sheegay in Ilaah adduunka ku xukumi doono qof uu isagu doortay, qofkaasuna wuxuu ahaa Ciise Masiix. Oo markii uu qoray Timoteyos, wuxuu uga hadlay isaga oo ku saabsan ninka Ciise Masiix. Isagu weli waa aadanaha oo sidan oo kale weli jidh ahaan buu u leeyahay. Isagoo kuwii dhintay ka soo sara kacay jidh ahaan ayuu samada u tegey. Kee noo horseedeysa su’aasha ah meesha saxda ah in jirkaasi hadda yahay? Sidee ayuu omni goob joog ah, oo aan ku xaddirinayn xadka ama xaddidaadda alaabtu, uu isla waqti ahaan jir ahaan ugu sugan yahay meel gaar ah?
Meydkii Ciise miyuu dul sabayn karaa meel bannaan? Ma garanayo Mana aqaano sida Ciise u dhex mari karo albaabada xiran ama ka hor imaan lahaa sharciga cufan. Sida iska cad, shuruucda jireed ma khuseeyaan ciise masiix. In kasta oo ay wali ku dhexjirto jidhka, kuma xidhna xadka u ehel ah jidhka jidhka. Tani wali kama jawaabin su'aasha ah jiritaanka maxalliga ah ee jidhka Masiixa, laakiin ma aha inaynu danteena ugu weyni ahano, miyaanu ahayn?
Waxaan u baahan nahay inaan ogaano in Ciise jannada ku jiro, laakiin ma ahan meeshii saxda ahayd. Waxaay noogu muhiimsantahay inaan ogaano jirka ruuxiga ah ee Masiixa, siduu Ciise hada ugu shaqeynayo dhulka dhexdeeda bulshada dhexdeeda. Oo taas wuxuu ku sameeyaa Ruuxa Quduuska ah.
Sarakiciddiisa muuqaal ahaaneed, Ciise wuxuu siiyay calaamad muuqata oo muujinaysa inuu isagu sii ahaanayo qof ahaan iyo sidoo kale ilaah. Sidaas ayaanu ku hubnaa, inuu yahay wadaad sare inuu fahmayo daciifnimadeenna, sida warqaddii Cibraaniyadu xustay. Iyada oo koritaanka Ascension uu qof walba u muuqdo, hal shay ayaa cadaatay: Ciise si fudud uma baabi'in - halkii, sidii wadaadka sare, u doode iyo dhexdhexaadiye, wuxuu kaliya ku sii wadaa shaqadiisa ruuxiga ah qaab kale.
Waxaan arkaa sabab kale oo ah sababta uu Ciise jannada ugu fuulay isagoo jir ah oo dhammaan u muuqan kara. Yooxanaa 16,7 wuxuu sheegayaa in Ciise ku yidhi xertiisii: "Waxaa kuu wanaagsan inaad iska tagtaan. Sababta oo ah haddaanan tegin, qalbi qabugu kuuma yimaado. Haddaan tago waan kuu soo diri doonaa.
Ma hubo sababta, laakiin sida muuqata Ascension Ciise wuxuu ubaahanyahay kahor Kentakostiga. Xertiina markay arkeen Ciise oo jannada kor loo qaaday, waxay hubsadeen in Ruuxa Quduuska ah ee loo ballanqaaday uu iman doono.
Marka ma jirin wax calool xumo ah, ugu yaraan wax noocee ah kuma xusna kitaabka Falimaha Rasuullada. Midna kama walwalayn xaqiiqda ah in maalmihii hore ee wanaagsanaa ee uu la qaatay Ciise jidh ahaan jireed ay ahaayeen wax la soo dhaafay. Waqtigi hore ee wadajirka ahaa sidoo kale looma jeedin. Hase yeeshe, mid ayaa si farxad leh u eegay mustaqbalka, kaas oo ballanqaaday inuu keeno waxyaabo aad u muhiim ah, sidii Ciise ballanqaaday.
Haddii aan sii wadno raacitaanka Falimaha Rasuulladu, waxaan ka aqrin doonaa xiisaha ay qabaan 120-ka walaala ah ee iimaanka ku jira. Waxay isu yimaadeen inay tukadaan oo ay sii qorsheeyaan shaqada horteeda. Waxay ogaayeen inay hayaan shaqo ay qabtaan, iyo
Sidaa darteed waxay doorteen rasuul inuu qabto meeshii Yuudas. Waxay ogaayeen inay tahay inay noqdaan 12 rasuul oo matalaya Israa'iil cusub, oo ah aasaaskii Ilaah aasaasay. Waxay ku kulmeen kulan wada jir ah; maxaa yeelay wax badan ayaa la go'aansaday.
Ciise wuxuu horey u faray inay adduunka oo dhan markhaati ka dhigtaan. Waxa keliya ee ay samayn lahaayeen, sidii Ciise ku amray, waxay ahayd inay sugaan Yeruusaalem sidii loo heli lahaa xoog xagga ruuxa ah, si loo helo kaaliyaha u ballanqaaday.
Markaa Ciise Ascension wuxuu u ekaaday duul riwaayadeed, daqiiqad xiisad laga sugaayay iftiinka bilowga ah ee rasuulladu waa inay gartaan qeybaha muhiimka ah ee u adeegaya iimaankooda. Sidii Ciise ugu ballanqaaday, xagga Ruuxa Quduuska ah waa inay ku qabtaan waxyaalo ka sii muhimsan Rabbiga mooyaane.
awood ka sarraysa. Ruuxa Quduuska ahi wuu nool yahay, waxbuu barayaa oo ku hadlayaa; isagu go'aan ayuu gaadhaa. Isagu waa shakhsi, qof rabaani ah, iyo sida qayb ka mid ah Ilaaha keliya.
Ruuxa Quduuska ahi wuxuu la mid yahay Ciise oo waxaan kaloo dhihi karnaa inuu Ciise inagu dhex nool yahay, wuxuu ku nool yahay bulshada kaniisadda. Ciise wuxuu sheegay inuu u imanayo oo uu la sii joogi doono kuwa rumaystayaasha ah - ee ku dhex jira - oo uu ku sameeyo qaab Ruuxa Quduuska ah. Sidaas daraaddeed Ciise wuu tegey, innaguu iskama daynin nafteenna ayuu dib ugu soo noqdaa Ruuxa Quduuska ah ee jira.
Laakiin sidoo kale wuxuu ku soo laaban doonaa jidh ahaan iyo muuqaal ahaanba qof walba, waxaanan aaminsanahay in tani ay ahayd sababta ugu weyn ee kor u qaadistiisa qaab isku mid ah. Waa inaanu ka fikirin inuu Ciise mar hore dunida ku yimid qaab Ruuxa Quduuska ah sidaas darteedna mar horeba waa loo soo noqday, sidaa darteed ma jiraan wax kale oo laga filan karo wixii aan hore u haysannay.
Maya, Ciise wuxuu cadeeyay in soo laabashadiisu aysan ahayn wax qarsoon, oo aan la arki karin. Waxay ahaan doontaa sida maalin cad oo cad, sida qorrax u soo baxa. Waxay u muuqan doontaa qof walba, sida Ascension uu u arki jiray qof kasta oo ku jira Buurta Saytuun ku dhawaad ​​2000 sano ka hor.
Tani waxay na siisaa rajo ah inaan filan karno wax ka badan waxa aan hadda haysanno. Hada waxaan aragnaa daciifnimo badan. Waxaan aqoonsan nahay daciifnimadayada, tan kaniisaddeenna iyo tan Masiixiyadda guud ahaan. Dhab ahaantii waxaa ina xidhan oo aan rajaynaynaa in arrimuhu wanaagsanaadaan, oo Masiixu wuxuu ina xaqiijinayaa inuu run ahaantii faragelin weyn ku sameyn doono boqortooyada Ilaah.
Isagu ugama tegi doono waxyaabaha sidii ay yihiin. Wuu soo laaban doonaa sida xertiisu u arkeen inuu jannada ku lumay - jidh ahaan iyo wax walba oo muuqata. Taasi waxaa ku jira xitaa hal faahfaahin oo aanan xitaa ku dhejin karin muhiimadda ugu badan: daruuraha. Baybalku wuxuu ballan qaadayaa in ciise, sida uu cirka ugaga soo degay daruur, uu soo laaban doono, oo daruuro wata. Ma aqaano micnaha qoto dheer ee ay ku dhex leeyihiin - waxay calaamad u yihiin malaa'igaha la soo muuqday Masiixa, laakiin sidoo kale waxaa lagu arki doonaa qaabkoodii hore. Mawduucani runti waa mid aad u yar.
Dhanka kale, soo laabashada layaabka leh ee Masiixu laftiisu waa udub dhexaad, waxaay la mid noqon doonaan nal iftiin, dhawaaqyo maqal iyo ifafaale u qorrax iyo dayax, qof walbana wuu arki karaa. Waxay noqon doontaa wax aan macquul aheyn. Qofna ma dhihi karo wuxuu ka dhacay goobtan iyo meeshaas. Markuu Masiixu soo noqdo, dhacdadani meelkasta waa laga dareemi doonaa, qofna su’aal kama weydiin doono.
Markay tanuna dhacdo, sida Bawlos ku sharaxay warqaddii ugu horraysay ee Tesaloniika, waxaan kulanoomaynaa Masiixa hawada dhexdeeda, meel fog kana fog dunida. Mid wuxuu ka hadlayaa xiriirkan rayrayn, tanina uma dhici doonto qarsoodi, laakiin waa u wada arki kartaa dadka oo dhan; Qof walba wuu raaci doonaa soo laabashada Masiixa ee dhulka. Markaa annaguna waxaan kula wadaagnaa Ciise aas aaskiisa iyo sidoo kale iskutallaabtiisa, aaskiisa iyo sarakiciddiisa. Anaguna waxaan sidoo kale u tagi doonnaa jannada si aan ula kulano Rabbiga soo laabanaya, ka dibna annaguna waxaan ku noqon doonnaa dhulka.
Si kastaba ha noqotee, garan mayno goorta waxaas oo dhan ay dhici doonaan. Miyey wax ka beddelaysaa wax kasta oo ku saabsan nolosheenna? Waa inuu sidan oo kale noqdaa. Xarafka ugu horeeya ee Korintos iyo warqaddii ugu horeysay ee St. John waxaan ku helnaa sharraxaad la taaban karo. Markaa waxay ku leedahay 1 Yooxanaa 1: 1-3,2: “Gacaliyayaalow, annagu hadda waxaannu nahay carruurta Ilaah; laakiin waxa aannu noqon doonnaa weli lama muujin. Laakiin waxaan ognahay haddii ay muuqato, inaan noqon doonno isaga oo kale; maxaa yeelay waxaan isaga ku arki doonnaa isaga siduu yahay. Oo mid kasta oo waxyaalahaas rajo ku leh isaga naftiisa wuu daahiriyaa siduu isaguba daahir u yahay.
Kadib Yooxanaa wuxuu sharxayaa in rumaystayaashu addeecaan Ilaah; ma rabno inaan ku noolaano nolol dembi leh. Waxaan aaminsanahay in Ciise soo laaban doono oo aan noqon doono sidii isaga oo kale oo leh saameyn la taaban karo. Waxay na keenaysaa inaan isku dayno inaan ka tagno dembiyadeenna. Tan micnaheedu maahan in dadaalkeenna na badbaadin doono ama dhaqankeenna anshaxdarro ah uu naga baabi'in doono; halkii, waxay ka dhigan tahay inaan doonaynin inaynu dembaabno.
Nooca Baybalka ee labaad ee tan waxaa laga heli karaa 1 Korintos 15 dhammaadka cutubka sarakicidda. Sida ku xusan xisaabtanka soo laabashadii Masiixa iyo sarakiciddeenna la'aantii, Bawlos wuxuu ku leeyahay aayadda 58: “Sidaas darteed, walaalahayga qaaliga ah, xoog yeelo, oo adkaysta oo had iyo goorba kordha shuqulka Rabbiga, maxaa yeelay waad og tihiin in shaqadaadu aan waxtar lahayn. waa xagga Rabbiga.
Sidaa darteed howshu horteenna ah, sida kuwii hore xertii u horraysay. Amarka Ciise iyaga ku siiyay waqtigaas sidoo kale way inaga quseeyaan. Waxaan haynaa injiil, farriin aan ku wacdinno; waxaana la ina siiyay awooddii Ruuxa Quduuska ah si aan ugu noolaano amarkan. Markaa howsha horteena ayaa jirta. Waa inaanu sugin si qiiro leh oo loogu soo laabanayo soo laabashada Ciise. Sidoo kale, sidoo kale uma baahnin inaan eegno Qorniinka tilmaamaha tilmaamaya goorta ay taasi noqon doonto, maadaama Kitaabka Quduuska ahi si cad inoogu sheegayaa inaanay annagu ahayn wax aannu ku ogaan karno. Taa bedelkeed, waxaan ballan qaadnay inuu soo laaban doono, taasna waa inay nagu filnaato. Waxaa naga horeeya shaqo, waana inaan sameynaa wax kasta oo aan ku qaban karno shaqada Rabbi, maxaa yeelay waxaan ognahay in shaqadan aan micno lahayn.